I-Rowenta Smart Force ebalulekileyo ye-Aqua, sihlalutya isicoci seerobhothi esikhuhla | Iindaba zeGajethi
I-Smart Force ebalulekileyo yeAqua ebhalwe nguRowenta, sihlalutya esi sicoceko sokucoca iirobhothi esizikhuhlayo
UMiguel Hernandez | | ngokubanzi, Reviews
KwiActualidad Gadget sihlala sinoluhlu oluhle lweemveliso ezinobuchule eziza kwenza ubomi bakho bube lula, oku kwenzekile uninzi lwezinto zokucoca iirobhothi, ezinye zazo zize zikhuhle, ke IRowenta Ubone kufanelekile ukuba asithumelele imveliso entsha ukuze sikwazi ukufumana iziphumo ezinokusinika zona.
Sinazo ezandleni zethu umzekelo I-Smart Force ebalulekileyo yeAqua eyenziwe nguRowenta, irobhothi ekrelekrele ekrelekrele kunye negqibeleleyo yokuqalisa kolu hlobo lwemveliso. Ke, hlala nathi kuba kuninzi esiza kukuthetha ngale mveliso intsha ekufuneka uyazi, sikuxelela uhlalutyo, ixabiso kunye nazo zonke iimpawu zalo ezifanelekileyo.
Njengesiqhelo, siza kwenza indlela kuyo yonke imisebenzi kunye nokubaluleka kwesixhobo kwinqanaba lokwakha. Ngokuqinisekileyo, Siza kuhamba nomba wamaxabiso, kodwa ukuba ufuna ukuya kujonga, ungahamba ngale khonkco uyithenge ngokuthe ngqo kwiAmazon,Okwangoku, sele ithengiswa kwiindawo zokuthengisa ezigunyazisiweyo ezinje ngeWorten, MediaMarkt kunye ne-El Corte Inglés.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Iyaqhubeka, ngaphandle kokubeka emngciphekweni
2 Ukucoca, ukutsala kunye nengxolo imisebenzi
3 Ukuzimela kunye neenzwa zokusebenza
4 Uluvo lomhleli kunye namava omsebenzisi
4.1 Okubi kakhulu
4.3 Eyona nto ibhetele
Uyilo kunye nezixhobo: Iyaqhubeka, ngaphandle kokubeka emngciphekweni
Le mveliso iyafana ngokuzimeleyo kwinqanaba lokwakha lemodeli ye-SPC esiyihlalutye kwithuba elidlulileyo, kodwa akukho ngaphezulu kwazo zonke ezi mveliso ngokubanzi zifana, kwaye olu hlobo loyilo lubonakalise ukuba lolona lusebenzayo kwaye luqhelekile kwezi mveliso , lelinye lamaxesha ambalwa apho singenakho ukubeka enye kodwa kwifemu yokungavuseleli kwinqanaba loyilo. Kufuneka kuqatshelwe njengenqaku lokudibanisa apho sifumana indawo ephezulu yeplastikhi ebengezelayo, kodwa isilivere ngombala, esivumela ukuba singayicoci ngokuqhubekayo ngenxa yothuli oluthi ngenxa yezizathu ezivakalayo litsale isixhobo esinomshini wezi mpawu.
Imilinganiselo: X x 32 13,3 41,8 cm
Sinobukhulu obujikeleziweyo be-32,5 cm iyonke, nge-8 cm ukuphakama. Unothotho lweenzwa, zihlala zenziwe ngeplastikhi. Kwicandelo elisezantsi sinebrashi yokutshayela esembindini, amavili adityanisiweyo ukuze angabambeki kwiindawo eziphakamileyo ezincinci okanye iikhaphethi, kunye noluhlu olulungileyo lweenzwa ezithintela ukuwa, kunye nee-infrared sensors emacaleni ukunqanda isandla esihle yokubetha, nangona ingezizo zonke, kuba kukho izinzwa zengozi. Idityaniswe kakuhle kunye nogwebu, ngenxa yoko asizukubangela monakalo kwifenitshala yethu, ukongeza ekufumaneni ukusondela kwabo, isinciphisa kakhulu isantya sokuqengqeleka.
Ukucoca, ukutsala kunye nengxolo imisebenzi
Sifumana irobhothi eneendlela ezintathu zokucoca: I-classic Imowudi engekhoyo ukuba iyakwenza irobhothi ijikeleze igumbi, ngokubanzi ayihambi ndawo inye kabini, kodwa inokuyenza kwiimeko ezithile, iyakucoca de ibe ne-15% yebhetri eseleyo isiseko sayo esiya kuyikhangela; Imowudi yegumbi elincinci, iya kwenza ucoceko olufanayo nolwangaphambili ukusuka kwindawo esembindini, kodwa ayizukubuyela kwindawo yokutshaja xa ishiye ibhetri eyi-15%, kodwa iyakwenza oko emva kwemizuzu engama-30 yokucoca; Imo Edge, Oko kukuthi, kuya kuthatha indawo ekubhekiswa kuyo ngohlangothi kwaye kuya kudlula iibhulashi ukuzama ukuphelisa ukungcola okufakwe kwiindawo ezizimeleyo ezinje ngeebhodi ezisezantsi okanye iikona.
Le robhothi inenqanaba elinye lomgangatho wamandla kunye nenkqubo yokucoca, kuba ke asinakho ukwenza imephu okanye nasiphi na isixhobo sokucoca ukulungiswa. Nangona kunjalo, Ngokulawula sinakho ukucwangcisa inkqubo yokucoca ngesandla, ukulawula iintshukumo zeerobhothi ngokwethu, njengenkqubo yeveki ngoqwalaselo lwalo lweyure. Indawo ekude ayibonisi ukuzimela kwerobhothi, kodwa iya kubonisa xa ine-15% yobomi bebhetri okanye ngaphantsi ngokusebenzisa ilogo yebhetri, into yesiko.
Itanki lokungcola: 0,25 litros
Itanki yamanzi ene-mop emanzi
Ingxolo: I-65 db
Sinento encinci itanki lamanzi Oku kuyakusivumela ukuba siphume nothuli sisebenzisa imophu emanzi, kule tanki idlulisiweyo kwaye kulula ukuyibeka sinokongeza amanzi kuphela, nangona sinokuhamba nawo kunye nolwelo lokucoca, nangona kufuneka sikhumbule ukuba ayisixinene, njengoko isenza nzima ukuba siyithambise. Le tanki ine-mop ebandakanyiweyo iyakwazi ukukhuhla nje emva kokutshayela kwaye ngaxeshanye, kodwa kufuneka sikhumbule ukuba kunokuba isuse uthuli, ubumdaka buya kuvala mop kwaye abuyi kuba nakho ukususa amabala abalulekileyo. Kwinxalenye yayo, irobhothi ikhupha i-65 db ingxolo ngelixa isenza imisebenzi yokuphefumla, ayininzi kakhulu, okanye ithule kakhulu, kumgca wolona hlobo lukhulu lweemveliso.
Ukuzimela kunye neenzwa zokusebenza
Njengoko besesitshilo, esi sixhobo sineenjineli ezintathu zokuwa ezisebenza ngokugqibeleleyo, ngendlela efanayo inamabhulashi amabini amacala anoxanduva lokuhambisa ukungcola kwindawo esembindini, apho sifumana khona ibrashi ende ende exhomekeke kumandla okutsala. . Oku kulungile kuba yenza ukuba irobhothi ibhetyebhetye kuzo zonke iintlobo zomhlaba, ngaphandle kokonakalisa.. Ngelishwa inqaku elingalunganga lale brashi kukuba zihlala zinamathela kwiinwele zasekhaya, kodwa izisa isixhobo sayo sokucoca kuzo zonke iintanda zemveliso.
Sinebhetri ye-lithium esinika imizuzu eyi-150 yokucoca ngentlawulo iyonke yeeyure ezintandathu ubuninzi. Kuvavanyo lwethu sifumene malunga nemizuzu eli-120 yokucoca malunga neeyure ezine zentlawulo. Asinayo idatha yamandla okutsala ngokusemthethweni, kodwa sinesiseko sokutshaja, apho isicoci seerobhothi siza kuhamba ngokuzenzekelayo ukuba siyayalela ngeqhina lolawulo, okanye xa ishiye ibhetri eyi-15%.
Uluvo lomhleli kunye namava omsebenzisi
Zimbalwa izinto zokugcina izinto ezifakwe ebhokisini
Okubi kakhulu esikufumene kwisixhobo Kuyinyani yokuba ayinayo inkqubo yokucoceka ekrelekrele esivumela ukuba sisebenzise ibhetri iye kwindawo ephezulu. Kwelinye icala, ngamanye amaxesha kunzima kakhulu ukufumana isiseko sokutshaja ukuba ngaphezulu kweemitha ezintlanu okanye ezintandathu ukusuka kuso. Kwelinye icala siphulukana namandla okutsala.
Eyona nto ibhetele
Hlikihla kwaye Utshayele
Eyona nto ndiyithandayo Kukunxibelelana kokukwazi ukudibanisa inkqubo yokutshayela kunye nokukhuhla ngaxeshanye, kunye nebrashi esembindini esivumela ukuba siyenze ihambelane nenani elikhulu lendawo ngendlela efanelekileyo. Ngendlela efanayo sinokuzimela kakuhle kunye nolwakhiwo olulungileyo ngokubanzi.
Inqanaba leenkwenkwezi ezi-4
€179 a €223
I-Smart Force ebalulekileyo ye-Aqua
Isixhobo esikhulu senqanaba lokungena I-Rowenta ibeka kwindawo yethu yokulahla malunga nee-euro ezingama-179 kule khonkco yeAmazon, ixabiso elifanelekileyo kuthathelwa ingqalelo iimpawu kwaye ngaphezulu kwako konke ukuthembeka okunikezelwa yiRowenta ngokwemiqinisekiso kunye nokuhambelana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Smart Force ebalulekileyo yeAqua ebhalwe nguRowenta, sihlalutya esi sicoceko sokucoca iirobhothi esizikhuhlayo
Ungayitshintsha njani iphasiwedi yakho ye-Gmail
Ingcali uJorge Rey uthetha ngokhuseleko lwenethiwekhi